राप्रपामा कमल थापा कि राजेन्द्र लिङ्देन? प्रतिनिधि के भन्छन्? :: खिलानाथ ढकाल :: Setopati
राप्रपामा कमल थापा कि राजेन्द्र लिङ्देन? प्रतिनिधि के भन्छन्?
भृकुटीमण्डपमा जारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को एकता महाधिवेशनमा देशभरका चार हजार बढी प्रतिनिधि छन्।
ती प्रतिनिधि कोही अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका कमल थापा र अर्का उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्देनको पक्षमा खुलेका छन्।
उनीहरू समूह-समूहमा बाँडिएर आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार-प्रसार गरिरहेका छन्।
तीस वर्षअघि स्थापना भएको राप्रपा फुट्दै, जुट्दै यसपटक एकता महाधिवेशन गरिरहेको छ।
हिन्दु राष्ट्र, राजासहितको प्रजातन्त्रको एजेन्डामा महाधिवेशन गएको राप्रपाका कार्यकर्ताहरू भने पार्टी कमजोर भएकोमा चिन्तित छन्।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि ३७ सिट संख्या कायम गरेर बलियो उपस्थिति देखाएको राप्रपा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक सिटमा समेटिएपछि तीन वटा पार्टी पुन: जुटेर राप्रपाले महाधिवेशन गरिरहेको छ।
पार्टी र उसका एजेन्डा कमजोर भएको भन्नेमा बहुसंख्यक प्रतिनिधि एकमत देखिन्छन्। तर, नेतृत्व परिवर्तनको सवालमा भने उनीहरू भिन्न-भिन्न राय राख्छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये ललितपुरका केही प्रतिनिधि लिङ्देनको पक्षमा खुलेका छन्।
काठमाडौंका केही क्षेत्रका प्रतिनिधि भने थापाकै पक्षमा देखिएका छन्।
हामीले काठमाडौं, ललितपुरसहित पाँच जिल्लाका राप्रपा प्रतिनिधिसँग कुरा गरेका छौं।
राजकुमार खड्का, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर-६ बाट
म केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुँ। राप्रपाको एजेन्डा जनतालाई मन परेको छ। एजेन्डा उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि नेता गणले जनतालाई बुझाउन नसक्नु कमजोरी हो। घर-घरमा गएर राजा र हिन्दुराष्ट्रबारे कुरा बुझाउन नसक्दा जनता विभिन्न पार्टीमा बाँडिएका छन्। त्यसो हुँदा राप्रपाका एजेन्डा छायामा परेर हराउने अवस्था आएको छ।
लिङ्देनले इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ। यो स्वाभाविक पनि हो। पार्टीमा व्यक्तिको नेताको हार-जित भन्दा पनि राष्ट्रिय मुद्दा कायम राखौं। जो नेताले काम गर्न सक्छ उही नेतृत्वमा पुगोस्।
तर, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएको उपप्रधानमन्त्रीसमेत भएको कमल दाइलाई एक पटक पार्टी हाँक्न दिऔं। हामी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४,५ र ६ का सय जना प्रतिनिधिले उहाँलाई समर्थन गरेका छौं।
प्रतिस्पर्धी नआइकन थाहा पाउनुभएन होला, तर, उहाँले पनि के बुझ्नुपर्छ भने म कमजोर रहेछु। उहाँलाई यसपालिको महाधिवेशनले सबक दिन्छ, खुस्किन्छु चिप्लिन्छु भन्ने भएको होला।
उहाँको उमेर पनि बढी भइसक्यो। अर्को कार्यकाल लिङ्देनले हाँकून्। लिङ्देन एकदमै मनपर्ने नेता हो। यसपालि भने कमल थापालाई नै समर्थन गर्ने भयौं।
रञ्जिता श्रेष्ठ, ललितपुर
राप्रपाको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन चलिरहेको छ। यसमा प्रखर रूपमा नेतृत्वको पुस्तान्तरण हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ, राप्रपाका एजेन्डा जनअनुमोदन हुनुपर्छ भनेर हामी नयाँ अनुहारलाई नेतृत्वमा ल्याउन लागिपरेका छौं। त्यो नयाँ अनुहार भनेको राजेन्द्र लिङ्देन हो। उहाँले उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ। पुस्ता हस्तान्तरण भयो भने राप्रपा अगाडि बढ्छ। देश विकासको लागि र एजेन्डाको लागि उहाँले काम गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ।
उहाँको नेतृत्वमा राप्रपा आफ्नो एजेन्डा अगाडि बढाउँदै भ्रष्टाचार निमूल पार्न, लुटतन्त्रको अन्त्य गर्न बृहत् रूपमा लाग्ने संकल्प लिएका छौं। युवा पलायन भएका छन्, देशमा रोजगारको सिर्जना छैन, आफ्नै देशमा राखेर उनीहरूलाई देश विकासमा लगाउनुपर्छ। उहाँबाट यही अपेक्षा लिएका छौं। उहाँको टिमबाट म केन्द्रीय सदस्य उठ्दैछु।
बनिकला बस्याल, स्याङ्जा
अरू त के भनौं, राप्रपाको एजेन्डालाई स्थापित गर्ने बलियो र काम गर्ने व्यक्ति नेतृत्वमा पुगोस्। हामीले हेरिरहेका, देखिरहेका छौं। नयाँको पनि काम देख्न मन छ।
पार्टी थामेर बसिरहेको व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउनुपर्छ भन्ने पनि छ। हाम्रो लागि नेता सबै बराबर हो। परिवर्तनको आवाज उठिरहेको छ, हामी कसलाई समर्थन गर्ने भनेर सल्लाह गरिरहेका छौं।
मीना पाठक, झापा क्षेत्र नम्बर ४
महाधिवेशनको माहोलमा छ, हामी हेरिरहेका छौं। नेतृत्वमा कसलाई लैजाने भन्ने अप्ठ्यारो प्रश्न छ। देश बचाउने र पार्टीलाई बलियो बनाएर लैजाने नेतृत्वको खाँचो छ।
त्यसका लागि जल्दोबल्दो युवा नेतृत्व आउनुपर्छ। झापाली भएको नाताले देशभरि एउटा पनि सिट कसैले नल्याएको खण्डमा राजेन्द्र लिङ्देनले जितेर इज्जत राख्नुभएको छ। म सहितका झापाली प्रतिनिधि उहाँलाई नै समर्थन गर्छौं।
सन्तोष धरेल, धादिङ बेनिघाट रोराङ अध्यक्ष
धादिङका साथीहरूले चुस्त दुरूस्त र राष्ट्र हाँक्ने अनि हिन्दु र राजसंस्था ल्याउन सक्ने हिम्मत भएको मान्छे नेतृत्वमा आओस् भन्ने चाहन्छौं। त्यस्तो मान्छेलाई हाम्रो समर्थन रहन्छ। उम्मेदवारी दर्ता भएपछि हामी धादिङबासी खुल्छौं। हामी परिवर्तनको पक्षमा छौं।
उद्धवचन्द्र घिमिरे (वरिष्ठ अधिवक्त), विराटनगर, केन्द्रीय सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि
राप्रपा अहिले आफ्ना कार्यदिशा र कार्यक्रमलाई समेट्दै नयाँ चरणमा आएको छ। पुराना तीन जना नेता एक भएर पार्टीलाई नयाँ दिशा दिने भनी एकता महाधिवेशनमा गएको छ।
राप्रपामा पुस्तान्तरणको व्याख्या पनि भइरहेको छ। तर, अहिलेको अवस्थामा र एजेन्डागत हिसाबले राप्रपालाई हाँक्न सक्ने क्षमता र लिगेसीको हिसाबले कमल थापा नै सक्षम हुनुहुन्छ। कमल थापाको नेतृत्व एक कार्यकाल हेर्ने अवस्था छ, त्यसपछि नेतृत्व नयाँ पुस्तामा जाओस्। किनभने यो पार्टीलाई एजेन्डाकै रूपमा विगतदेखि हालसम्म हिन्दु राज्य र राजसंस्थालाई बहसमा ल्याउने काम कमल थापाले गर्नुभएको छ।
एक पटक उहाँकै नेतृत्वमा यो एजेन्डा स्थापित हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। साथसाथै नयाँ सोचको साथ नयाँ कार्यकर्ता उत्पादनमा राप्रपा लाग्नुपर्छ। विद्यार्थीदेखि नै संगठन निर्माण गर्नुपर्छ। पार्टीको उद्देश्य फराकिलो दायरामा, आफ्ना भ्रातृ र भगिनी संस्थाहरू बनाएर तल्लो तहदेखि संगठन बनाएर आउनुपर्छ।
अहिले राप्रपामा एजेन्डाको विषय स्पष्ट छैन। हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा भनिएको छ, कस्तो राजसंस्था, कस्तो हिन्दु राज्य भन्ने कुरामा स्पष्ट नीति ल्याइनुपर्छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १६, २०७८, ०९:०१:००